Hiran State - News: Dagaalkii u dhaxeeyey Farmaajo iyo Shabaab ee gobolka Gedo oo waji kale yeeshay.
Dagaalkii u dhaxeeyey Farmaajo iyo Shabaab ee gobolka Gedo oo waji kale yeeshay.
Gobolka Gedo waxaa ku yaala magaalooyin dhawr ah oo istiraatiiji ah, waxuuna ka mid ahaa gobolada ay si buuxda ugu taliyaan urur Shabaab hayeeshee tan iyo markii uu dalka ka noqday Farmaajo wasiirka 1aad waxuu geed dheer iyo mid gaaban u fuulay sidii uu xooga u saari lahaa inta uusan waqtiga ka dhamaan inuu kooxahaan ka sifeeyo degaanka uu ka soo jeedo isagoo iska indha tirayo gobolada kale ee dalka oo ay ciidamo Somaliyeed oo diyaar ah iney dhulkooda xoreystaan ay jiraan.
Farmaajo oo qorsheynaya in marka la xoreeyo Gedo isla markiiba looga dhawaaqo maamul goboleed lagu aqoonsanayo si deg deg ah ayaa ku guuleystay inuu dagaalada Gedo ka saaro dhalinyarada degaankaas ka soo jeeday iyo hogaamiyayashooda kediba waxaa u sahlanaaday inuu si sahlan ku qabsado degmooyin badan oo ay ka mid yahiin Belet Xaawo, Ceelwaaq, Luuq iyo Garbahaarey oo ay hada dagaalo ka socdaan duleedka magaalada.
Ururka Shabaab ayaa lagu soo waramayaa iney bedeleen dhamaanba hogaamiyayaashii Shabaab ee degaankaasi ka soo jeeday iyagoo ka kala yimid qeybaha kale ee ay kaka sugan yahiin koofurta Somaliya waxeyna bilaabeen dagaalo iskugu jira ku dhufo oo ka dhaqaaq iyo mid toos ah, Shabaab ayaa si toos ah u cidleeyey magaalooyin ay ka mid yahiin Waajid, Bardaale iyo qeybo ka tirsan magaalooyin hoos taga Hiiraan iyagoo ciidamadii joogay iskugu geeyey gobolka Gedo.
Gobolada kale ee dalka ka jira indhaha ayey ka daawanayaan maadaama Farmaajo uu u kala eexanayo ciidamada Somaliyeed ee kala jooga gobolada dalka oo uu kuwane masuuliyiintooda maaweelinayo kuwane uu siinayo waxii ay u baahnaayeen. Somali sidee qabiil laga yeelaa qabiil qaran noqon waaye ayuu yiri gabyaa reer Hiiraan ah oo la yaaban sida ciidamada Somaliya ay xukumada Farmaajo u kala tagooreyso.
La soco dagaalada u dhaxeeya Farmaajo iyo Shabaab ee Gedo saacad kasta.
· admin on April 30 2011 12:11:53 · 0 Comments · 1920 Reads ·
14,633,176 unique visits